Ukuzenzekelayo kunye nokubangela Ixesha liyinto yonke, ke ukufumana i-imeyile ngokusekwe kwithemba lakho okanye indlela yokuziphatha kwabaxumi kubalulekile ukuqhubela phambili ubudlelwane.
Amaqhosha kunye neefowuni zokwenza isenzo -Ukuba ubufake i-imeyile yakho njengephepha lokufika, ngaba kukho umnxeba wokuya kwisenzo ukuqhuba umrhumeli kwinyathelo elilandelayo lokuzibandakanya nophawu lwakho? Ukuba akunjalo, uphoswa lithuba elikhulu lokwandisa i-imeyile yakho.
imifanekiso -Iibhokisi ezingenayo zixakekile, ke kulindeleke ukuba umntu obhalisileyo afunde onke amagama ayilwe ngononophelo owafake kwi-imeyile yakho akunakwenzeka. Yandisa ukuzibandakanya kunye nokucofa ngokubonelela ngemifanekiso enyanzelisayo ukutsala umrhumeli ukuba afunde kwaye ucofe. Yongeza ii-GIF zoopopayi ukongeza ubuqaqawuli!